တက် . ပဟ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » တက် . ပဟ
တက် . ပဟ
Posted by ကထူးဆန်း on Mar 1, 2012 in Myanma News, News | 21 comments
ဒီကနေ့ ၁-၃-၁၀၁၂ ကနေ စက်သုံးဆီ ဈေးတက်တဲ့ အတွက် ဆိုပြီး Fuel Surcharge ဆိုပြီး ရန်ကုန် လေကြောင်းလိုင်းက စတင် ကောက်ခံပါပြီ။
အခြား လေယာဉ် လိုင်းများမှ လည်း မကြာမီ ကောက်ခံသွားမယ်လို့သိရပါတယ် ။
ရန်ကုန် လေကြောင်းလိုင်းမှ ဖြန့်ဝေခဲ့တဲ့စာပါ။ မြန်မာပြည်ထုံးစံအတိုင်းကပ် လုပ်တော့ ခရီးသွားများနဲ့ ခရီးသွားလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူများ စကားများကြဦးပေါ့နော် .. ဘာဖြစ်လို့ ကြိုမပြောတာလဲဆိုတာ ဒိုင်ခံ ဖြေရှင်းကြတော့ဘဲ..
Date	: 29th February, 2012
Ref. No.	: YA/BDD/069/12
Greetings from Yangon Airways!
Due to the fuel price increase from Ministry of Energy starting from 1st March, 2012, we would like to inform you that Yangon Airways is collecting the new fuel surcharge at airline check-in counters effective from 1st March 2012. Please kindly find the new sector by sector fuel additional surcharge rates in the attachment file.
Do you have additional information, please do not hesitate to contact us.
Yangon Airways’ Management
Additional YR for Foreigner and Myanmar National
Effect from 01st March 2012 to Until further notice
Sr SECTOR or v.v	Published	Additional PublishedMyanmar
Fare	YR	Fare MMK )	R
1	Yangon – Naypyitaw	140	10	45000	12000
2	Yangon – Mandalay	188	15	65000	12000
3	Yangon – Nyaung U	178	15	53000	12000
4	Yangon – Heho	178	15	53000	12000
5	Yangon – Tachileik	198	15	112000	12000
6	Yangon – Kyaingtong	198	15	112000	12000
7	Yangon – Myitkyina	300	25	120000	18000
8	Yangon – Thandwe	128	10	65000	12000
9	Yangon – Sittway	178	15	80000	12000
10	Yangon – Lashio	240	15	110000	12000
11	Yangon – Dawei	150	15	52000	12000
12	Yangon – Myeik	190	15	79000	12000
13	Yangon – Kawthaung	250	25	112000	18000
14	Naypyitaw – Mandalay	120	10	40000	7000
15	Naypyitaw – Nyaung-U	120	10	35500	7000
16	Naypyitaw – Heho	120	10	25000	7000
17	Naypyitaw – Kyaingtong	180	15	85000	12000
18	Nyaung U – Mandalay	78	10	23000	7000
19	Nyaung U – Heho	118	10	40000	7000
20	Heho – Mandalay	78	10	23000	7000
21	Heho – Tachileik	128	10	76500	7000
22	Heho – Kyaing Tong	128	10	76500	7000
23	Heho – Thandwe	198	15	65000	12000
24	Heho – Lashio	128	10	45000	7000
25	Nyaung-U – Thandwe	198	15	65000	12000
26	Mandalay – Tachileik	165	15	85000	12000
27	Mandalay – Kyaing Tong	165	15	85000	12000
28	Mandalay – Myitkyina	165	15	55000	12000
29	Mandalay – Lashio	78	10	45000	7000
30	Tachileik – Kyaing Tong	78	10	21000	7000
31	Thandwe – Sittway	118	10	42500	7000
32	Kyaukphyu – Sittway	78	10	7000
33	Dawei – Myeik	85	10	30000	7000
34	Dawei – Kawthaung	180	15	58000	12000
35	Myeik – Kawthaung	100	10	36500	7000
ဘာ ဂဏန်းမှန်း မသိမှာစိုးလို့ .. ဥပမာ
နံပါတ် ၃၅ က မြီတ် × ကော့သောင်း နိုင်ငံခြားသား က ဒေါ်လာ ၁၀၀ fuel surcharge 10 ၊ မြန်မာနိုင်ငံသား ၃၆၅၀၀ ကျပ် ဆီဘိုးထပ်ဆောင်းငွေ 7000 ထပ်ပေးရပါမယ်။
အင်း … အရင်ဈေးနဲ့တောင် လေယာဉ်ပျံကြီး စီးနိုင်ဘူးရယ် ..
အခု ဈေးတက်လိုက်ပြီဆိုတော့ …
ပိုပြီး အလှမ်းဝေးသွားတာပေါ့ဗျာ …..
ဘာဖြစ်ဖြစ် ထီပေါက်ရင်တော့ …
လေယာဉ်ပျံကြီး စီးကို စီးလိုက်ဦးမှာ …
လေယာဉ်လက်မှတ်ခ များ ဈေးတက်သွားခြင်း ကို လွန်စွာ စိတ်ပျက်မိပါကြောင်း ။
နှစ်ယောက် တတွဲ ဒါမှမဟုတ် အဖွဲ့ လိုက် ဆို
တော်ပါပြီ . ကိုယ်ပိုင်လေယာဉ်နဲ့ပဲ သွားတော့မယ် …
အမလေးဗျာ လေယာဉ်တွေကလဲကောင်းပါသနဲ့ ဗျာ။
ဈေးနှုန်းတွေကတော့ ရှယ်ဘဲ ကိုထူးဆန်းရေ။
ရန်ကုန်-Mdy ကို ၇၇၀၀၀ ….အခုနေ online ကနေ ၇န်ကုန် – ကွာလာလန်ပူ ကို Apr9အတွက် ဘွတ်ကင်တင်တာ USD 113 (90000 Ks) လောက်ပဲကျတယ်….ပြည်တွင်းလေကြောင်းလိုင်းက ဈေးတွေ
သိပ်များနေပါတယ်….Air Asia လိုမျိုးလေကြောင်းလိုင်းတွေ ပြည်တွင်းပြေးဆွဲလာရင်သိပ်ကောင်းမှာပဲ
Normal Fare ဖိုးတောင်အနိုင်နိုင်ကို ….. YR ကြီးပါတက်လိုက်တော့ ……………… ဆင်ပေါက်သီချင်းလိုဖြစ်သွားရော …. “ဂိုးပြီ…ဂိုးပြီ” ……………. ကိုယ်တွေသာမစီးနိုင်တာ … တစ်ချို့သော Airline ကြီးများရဲ့ Schedule မှာဆို6ယောက်လောက်နဲ့ Charter ကိုပြည့်လို့ ….. လှည်းတန်း-မြေနီကုန်းလောက်ကို တက်ကစီ ငှားနေသလားထင်ရတယ်…. ဘယ်ဒူတွေစီးကြီတုန်းသိဝူး………………………
Normal Fare ဖိုးတောင်အနိုင်နိုင်ကို ….. YR ကြီးပါတက်လိုက်တော့ ……………… ဆင်ပေါက်သီချင်းလိုဖြစ်သွားရော …. “ဂိုးပြီ…ဂိုးပြီ” ……………. ကိုယ်တွေသာမစီးနိုင်တာ … တစ်ချို့သော Airline ကြီးများရဲ့ Schedule မှာဆို6ယောက်လောက်နဲ့ Charter ယူထားတဲ့ရက်တွေကိုပြည့်လို့ ….. လှည်းတန်း-မြေနီကုန်းလောက်ကို တက်ကစီ ငှားနေသလားထင်ရတယ်…. ဘယ်ဒူတွေစီးကြီတုန်းသိဝူး………………………
အများအားကိုးနေရတဲ့ မမတက်တာ ပိုဆိုးပါတယ်။
ပိုက်ဆံကျတော့ အကြောင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ တိုးကောက်ဖို့ပဲ တွေးနေတယ် …
၀န်ဆောင်မှု ၊ ဘေးကင်း လုံခြုံမှုနဲ့ … လှိုက်လှဲ ပျူငှာမှုတွေတော့ … တိုးမလာပဲ …… ဒုံရင်းက … ဒုံရင်းနဲ့
တော်ပါပြီ နီးနီးဝေးဝေး စက်ဘီးနဲ့ဘဲသွားတော့မယ်။
ခရီးသွား ရာသီ မိုလို့ တက်တာ များလား..
ကမ္ဘာအဝှမ်း မှာကို လောင်စာဆီ တက်နေတာမို့ တက်သင့်တာတက် တာ fair enough ပါ။
ကိုယ့်နိုင်ငံ ကမှ ရေနံ ကို အဖြစ် မထုတ် နိုင်တာ။
ဒါပေမဲ့ ပြည်တွင်းမှာ ပေါပေါသီသီ စိုက်နိုင်၊ မွေးနိုင် (တိရိစ္ဆာန်) တဲ့ အခြေခံ စားကုန် တွေ ကို အပြင်ကို အင်တိုက်အားတိုက် ပို့နိုင် ရင် ဘဲစားဘဲခြေ ပေါ့။
ကိုယ်ရဲ့ တိုင်းပြည် မှာရှိတဲ့ သာကွက် ကို ပြည်သူတွေ အတွက် ကောင်းကောင်း အသုံးမချနိုင်/ မသုံးချတတ် သူတွေ (ကိုယ့် အိတ်ထဲချည်း ထည့်နေသူတွေ) ထိပ်ကပ်ပြီး ရှိနေသမျှ တော့ ………
ဟုတ် တယ် အရီးလတ် . မပြောနဲ့ သိလား … တိုက်ပ်ရိုက်ပြီးတော့ သူကြီးဂေဇက်မှာသာတင် .. :grin: :grin:
တိရိစ္ဆာန်တွေက. သတ်ဖြတ်စားသောက်ဖို့.. မွေးမြုရေးမလုပ်သင့်ဘူး..
နောင်ဘ၀မှာလေ… ကြီးကုန်မှာ.. ငရဲတွေကြီးကုန်မှာ…
သတ္တ၀ါတွေ.. အင်မတန်သနားစရာကောင်းပါတယ်..။ ကိုယ်ချင်းစာပြောပါနော.။
သူများအသက်သတ်တယ်ဆို.. ဘယ်လောက်သနားဖို့ကောင်းလည်း..။ နွားတချို့များ.. သတ်ခံရမယ်ဆို.. မျက်ရည်တွေကျလို့..။
မနက်မိုးချုပ်.. ပင်ပန်းလွန်းလှပါတယ်..။ သေရင်ဘာမှပါတာမဟုတ်ဖူးလေ..။
ကိုယ်အိပ်ထဲ..ကြိုက်သလောက်ထည့်… သေရင်. ဘာမှမပါပါဘူး..။
တရားအားမထုတ်နိုင်သူ.. တရားစခန်းမ၀င်နိုင်သူတွေကလည်း.. တရားအားထုတ်ကုသိုလ်လုပ်နေသူတွေပဲ… လှူပါ..။ အင်မတန်ကုသိုလ်ရပါတယ်..။
လမ်းတွေဖေါက်ပါ..။ အဆောက်အဦး(စေတီ၊ပုထိုး)တွေဆောက်ပါ..။ ကျောင်း(ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း၊ သာသနဗိမ္မာန်၊ ဓမ္မာရုံတွေဆောက်ပါ..။
အမေရိကား မှာ ငလျင်တွေ အကြီးအကျယ် လှုပ်ကုန် အုန်းမယ်။
သဂျီးနဲ့ နီးတဲ့ အရပ်မှာ နေသူတွေ အိမ်တိုင်ဖက်ထားကြ.. တော်ကြာ ငလျင်လှုပ်လို့ ပြိုကျသွားမှာစိုးလို့။
ဝေးဟေးဟေး…သဂျီးကျွတ်ခါနီးဘီကွ…။ ကျွတ်သွားရင် ဟိုဖက်လှည့်နေသဂျီးရေ…တန်းလန်းတန်းလန်းနဲ့ လူမြင်မကောင်းဘူး.. ခွေးအဆွဲခံရလိမ့်မယ်…။
အခုမှ သူကြီးက သူကြီးနှင့် မတူသော အတွေး တွေးတာကိုး …. အဟဲ ။။
ရန်ကုန်မှာ ရေမီတာဖိုးတွေတောင် ဧပြီ ၁ ရက်ကစ ပိုကောက်တော့မယ်ကြားတယ်